China Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss boss chikepe chevaraidzo yemitambo mahedhifoni vagadziri uye vanotengesa | Kaiwansi
1. Chigadzirwa sumo:
Iyi ks-020 inoumbwa ne bk: 3200 chip, uye iyo vhezheni yeBluetooth iri 5.0. Giredhi isina mvura IPx5. Isu tiri OEM yechikepe.
2. Fithem Chigadzirwa paramende sumo
3. Zvimiro zvezvigadzirwa zveFithem
Diki, inotakurika, inonamira nzeve nemagineti basa. Haizokanganisike senge yechinyakare headphone zvitaera.
4. Fithem chigadzirwa ruzivo
Iwo mahedhifoni haazove akaremara nekuda kwekumisidzana zvakapetwa. Yakaomarara kwazvo, zvigadzirwa zvedu zvinovimbiswa kwegore rimwe chete.
5. Inoshandisa yazvino Bluetooth 5.0 vhezheni yekutepfenyura isina waya, uye inotsigira SBC, AAC uye Aptx yepamusoro-coding protocol. BUILT-IN 110MAH bhatiri rechargeable, mudunhu rechaji yakazara, inogona kupa kusvika kumaawa gumi nematanhatu emimhanzi inoridza kutsungirira. Kugonesa vashandisi kuwana yakajeka mhando yemhando, asi zvakare kuwedzera kwakakosha mukufona vibration neck band basa, kuona kuti foni haina kupotsa.
6. DZIDZO YEMAHARA: tinya wedzera inogona kurira ruzha kudzvanya kudzikisa kunogona kudonhedza toni, maviri plus kiyi inogona kufambisira mberi rwiyo rwechipiri kubvisa kiyi kunogona kudzorera rwiyo kumashure. Iyo yepakati yekudzora kiyi inogona kushandiswa kumisa mimhanzi. Iyo Middle Kudzora chinzvimbo haina mvura uye haizokanganiswe nemamiriro ekunze, kana pakuonekwa kana kurira kwekuita kuchanyatso kuratidza kunzwa kunonakidza kwazvo, asi iro basa rehunhu mhando rakanaka kwazvo.
7. Mutengo wacho unodhurawo kupfuura iwo iwo mutengo mumwe chete, hwefoni yekuita mutengo chiyero chiri pamusoro uye chiri nani. Chigadzirwa chine zvakare kutengesa uye odha pane ALIBABA yepasirese saiti, Tarisa pane chinonyanya kudikanwa chikamu chemushandisi, kuitira kuti pakuonekwa, kupfeka, kufona, uye nemutinhimira usakwanise kusarudza iri pfupi bhodhi, ive musika uye anokwikwidza kwazvo mutyairi zvinhu.
Pashure: Fithem ks-016 Wireless stereo neckband bluetooth Chip 5.0 sports headphone
Zvadaro: Fithem Ks-816 Wireless MAKARALI USB tws headset yakaderera-treble headset inogona kuvezwa logo
Fithem ks-011b isina mvura mimhanzi isina waya blueto ...